Ady amin’ny kere: mirotsaka any atsimo ny minisitra Michelle Bavy - ewa.mg
Ady amin’ny kere: mirotsaka any atsimo ny minisitra Michelle Bavy
News - Ady amin’ny kere: mirotsaka any atsimo ny minisitra Michelle Bavy
Mandray anjara feno amin’ny ady
amin’ny kere any atsimon’ny Nosy ny minisitra Michelle Bavy
Angelica. Nizara sakafo sy vatsy ho an’ireo marefo ny tenany
niaraka tamin’ireo ekipa mpiara-dia aminy. Nisitraka izany ny tao
amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo, ahitana kaominina telo toy ny
kaominina Ebelo, fokontany Analamalinika. Teo koa ny kaominina
Ifotaka, fokontany Ankilimahavotse ary ny kaominina Behara,
fokontany Behara no nisitraka izany. Nahitana paty, ovy
voakarakara, sardines…Tao anatin’ireo sakafo nozaraina
isan-tokatrano. Mahatsiaro ho tompon’andraikitra amin’ny fanarenana
ny faharefoan’ny olona vokatry ny kere mivaivay any atsimo ny
minisitry ny Mponina ka tsy mikely soroka amin’ireo asa firotsahana
ifotony. Mamita ny iraka ampanaovin’ny filoham-pirenena azy ny
tenany, amin’izao ady amin’ny mosary izao ary tsy hitsahatra ny ady
raha tsy fongana tanteraka ny hanohanana mianjady amin’ireo mpiray
tanindrazana any an-toerana.
L’article Ady amin’ny kere: mirotsaka any atsimo ny minisitra Michelle Bavy a été récupéré chez Newsmada.
Famonoana mpisolovava tetsy Antanimena: nidoboka eny Antanimora ireo zanaka jeneraly roalahy
Taorian’ny fakana am-bavany nataon’ny fampanoavana azy ireo, naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora, omaly, ireo miaramila roalahy, zanaka jeneraly, voarohirohy tamin’ny famonoana ilay mpisolovava tetsy Antanimena. Tara ny fampiakarana ny raharaha teny amin’ny fitsarana omaly, raha tokony ho tamin’ny 10 ora izany, ireo miaramila roa lahy Arnaud sy Erlie. Efa ny tamin’ny 12 ora vao teny amin’ny fampanoavana ny raharaha. “Nisy ny olana teo amin’ny fikarakarana ny taratasy sy ny dingana tokony narahana ka izay ny antony nahataraiky azy”, hoy ny fanazavana. Teo ihany koa ny tsy fisian’ny mpisolovava niaro azy roa lahy ireo. Afakomaly mantsy dia nisy ny hetsika nataon’ny Holafitry ny mpisolovava ho fanehoam-piraisankina noho ny nanjo an’ity namany voadaroka ity. Mbola tonga maro teny amin’ny fitsarana ny mpisolovava omaly. Niandry ny fanendren’ny fitsarana izay mpisolovava hiaro azy ireo, araka izany, ireto miaramila ireto, vao afaka natolotra ny fampanoavana. Rehefa nilamina ny fombafomba tsy maintsy natao, niroso tamin’ny fakana am-bavany azy roalahy ireto ny mpitsara mpanao famotorana. Taorian’izay no nampidirana azy ireo am-ponja vonjimaika eny Antanimora. Namoaka “avis de recherche” ho an’ny olona fanintelony naman’izy roa lahy ireo. Ity farany izay efa nahazo fampiantsoana, saingy tsy nipoitra no sady tsy tratra antso intsony. Andaniny, nametraka fitoriana ilay mpisolovava ihany koa izy roa lahy ireo. Fitoriana ilay mpisolovava ho nikasa hamono azy ireo. Araka ny fanazavana, efa nisy ny fihainoana vavolombelona maro tamin’ity raharaha ity. Anisan’izany ny mpanao gazety iray izay nahita ny zava-nitranga sy anisan’ny niharan’ny herisetra ihany koa. Efa nohenoina ihany koa ny mpiambina roa lahy tao amin’ilay trano filanonana teny Antanimena. Miandry ny fitsarana azy ny raharaha. Andrasan’ny olona… Samy miandry ny fitsarana ny raharaha izany ny rehetra. Anisan’ny maro ny olona manaraka ity raharaha ity ary nahabe resaka. Maro ny mihevitra ny hisian’ny mizana tsindrian’ila, ny fisian’ny lava tanana sns. Raha ny omaly aloha, ireo naiditra am-ponja vonjimaika ireo iretsy miaramila roa lahy zanaka jeneraly. Anisan’ny notakian’ny rehetra ny hanamparana ny lalàna ho an’izay manao herisetra. Heverina fa ho toy izay koa amin’ny fotoana izay hitsarana ny raharaha. Manahy hatrany ny olona fa ho afa-maina rehefa mahitahita eto amin’ny tanàna. Mendrika ny hampiharana ny sazy faran’ny henjana ny manao herisetra am-pahibemaso, na ko ny nahatonga izany rehetra izany. Yves S. L’article Famonoana mpisolovava tetsy Antanimena: nidoboka eny Antanimora ireo zanaka jeneraly roalahy a été récupéré chez Newsmada.
SESAM – Andiany faharoa: taranja 12 hifampizara traikefa
Miditra ao anatin’ny andiany faharoa amin’ny taona ity ny hetsika karakarain’ny Seho Event, nomeny ny anarana hoe Sesam (Sports Extrêmes et Salon des Arts Martiaux). Hetsika natokana indrindra ho an’ny taranja “arts martiaux”. Ny 9 hatramin’ny 11 aogositra no hanatanterahana izany, eny amin’ny Parvis Analakely, hampisehoan’ireo mpikatroka ao anatin’ireo taranja 12 mandray anjara, ny mampiavaka ny taranjany tsirairay. Araka ny efa nahafantarana azy, hisarika ny tanora hankafy sy hampiroborobo ny fanatanjahantena, fa tsy ho variana amin’ny zava-mahadomelina sy ny revy, no tena tanjona amin’ity hetsika ity. Hiavaka ny amin’ity andiany faharoa ity satria misy ireo taranja vaovao sambany ho tazana amin’ity hetsika ity, toy ny taranja Kempo, ny taibo, ny Akama ary ny Kickboxing.Araka ny nambaran’ny mpikarakara, amin’ny toerana be olona no hanaovana azy ary hitombo bebekokoa noho ny tamin’ny taon-dasa ny fampisehoana isaky ny taranja. Hisy mihitsy, ny tatami lehibe hanaovana izany fampisehoana izany, hisy ihany koa ny fampianarana maimaimpoana. Ankoatra izay, toy ny mahazatra, tsy ho very anjara ireo izay maniry ny hividy na hanjifa fitaovana ara-panatanjahantena, hisy ny fampirantiana izany, toy ny fanamiana ara-panatanjahantena sy ireo fitaovana ilaina amin’ny taranja “arts martiaux” ary ny “sports extrêmes”. Mbola hisy ihany koa ilay tombola hahazoana loka goavana sy loka maro be mifandraika indrindra amin’ny resaka fanatanjahantena. Tapakila fidirana 2000 ar dia efa mety hahazoana izany loka izany.Araka ny fanazavana nentin’ireo dojo sy ny taranja efa nandray anjara tamin’ny herintaona, nahafa-po ary tena nitondra vokatra tsara tamin’ny fampandrosoana ny taranja tsirairay avy, ny andiany voalohany. Antony mbola mahatonga azy ireo hanatevin-daharana izany amin’ity andiany faharoa ity. Ho an-dRakotonirina Parfait, avy amin’ny taranja Kempo sy MMA (Mixed Martial Arts), sambany ny fandraisana anjara amin’ity, isan’ny nanosika azy ny fahafahany mampisongadina ny taranja Kempo sy MMA eto Madagasikara, amin’ny alalan’ity hetsika karakarakin’ny Seho Event ity, hampisehoany ihany koa fa manana zavatra betsaka omena ny mpikatroka malagasy amin’io taranja io.Mampanantena, araka izany, ny Seho Event, fa ho seho sy hetsika miavaka no ho hita mandritra ny 3 andro, ny 9, 10 ary 11 aogositra eny amin’ny Parvis Analakely. Mi.RazL’article SESAM – Andiany faharoa: taranja 12 hifampizara traikefa a été récupéré chez Newsmada.
Mahavita tena ara-tsakafo
Anisan’ny voasoratra ao anaty boky mena nosoratan’ny filoha Ratsiraka ny hoe : « ny firenena matanjaka amin’ny taona 2000 dia izay firenena mahavita tena ara-tsakafo ary manondrana ny ambim-bavany any ivelany ». Mazava tsy misy ampina na analana io teny io, fa anjarantsika ny mijery raha tanteraka tokoa na tsia, na zary mijanona ho kabary tsara lahatra, toy ny mahazatra. Hatramin’izao, manafatra vary any ivelany i Madagasikara, sady lafo ny vidiny ho an’ny sarambabembahoaka, satria miaina anaty fahantrana ny 85%-n’ny Malagasy. Na izany aza, somary nihena kely ny vidiny amin’izao fotoana ao anatin’ny fararano izao. Tsara rahateo ny vokatra satria tsy nisy loatra ny tondradrano nanapotika ny tanimbary tamin’ny fotoam-pahavaratra teo.Fototry ny fahazoana voka-bary tsara ny fanajariana ny lemaka, ny fitantanana ny rano, ny fampiasana masomboly tsara sy zezika ampy. Eo koa ny fampiasana fitaovam -pambolena nohatsaraina sy mekanika. Mila vola hoenti-manana ho ampy anefa izany rehetra izany. Mahantra ny Malagasy ka tsy manana ny hoenti-manana sahaza amin’izany. Tsy misy ny antontanisa tena mazava, mamaritra ny masonkarena amin’ny tanimbary 1 ha eto amintsika. Tsy natao ho an’ny rehetra ny fampindramam-bola, satria tsy manana antoka koa ny ankamaroan’ny tantsaha, fa ny matanjaka ihany no afaka manao izany. Any amin’ny tany mandroso, manampy ara-bola mivantana ny tantsaha ny fanjakana, raha tsy hiteny afa-tsy ny any Frantsa ohatra. Miady irery ny antsika, fa tsy afaka manao izany ny fanjakana.Ataon’ny fanjakana ankehitriny tanjona indray ny fahavitan-tena ara-tsakafo ary nanao toy izany koa ny teo aloha nifandimby teo. Maro ny paikady nofaritana, tsy vitsy ny hetsika natao, fa ny vokatra azo tsapain-tanana no tena andrasana. Noraisina iry paikadin’ny filoha teo aloha iry, ary natao tanjona ny hanondranana vary any ivelany.Njaka AndriantefiarinesyL’article Mahavita tena ara-tsakafo a été récupéré chez Newsmada.
Zon’olombelona – Fiarahamonim-pirenena: mangata-panazavana momba ny ”RaharahaFarafangana”
“Manaitra ny manampahefana sy ny mana-mahefa isan-tokony hanome fanazavana misimisy kokoa sy handray fepetra tamin’ny tandrevaka sy ny fanamparana diso tafahoatra hery izahay.” Io ny fanambaran’ny firaisamonina sivily any Farafangana, manoloana ny fandosiran’ny voafonja narahina fitifirana ka nisian’ny maty sy ny naratra. Manao sonia izany ny ONG Fiantso, ny Aumônerie catholique de prison, ny vovonan’ny firaisamonina sivily ao amin’ny distrikan’i Farafangana.Manameloka ny fandatsahana aina izy ireo, mahatsapa fa tsy nifandanja tamin’ny zava-nisy ny fitifirana tsy ankiato niseho tamin’ny fanenjehana ireo voafonja nandositra. Melohin’izy ireo koa ny fanambarana miendrika fanapepoana ataon’ny manampahefana mpitandro filaminana vitsy miantefa amin’izay mitaky ny fanajana ny zon’olombelona ka anatin’izany ny voafonja.Andrasan’izy ireo ny hetsiky ny CINDH sy ny HCD, ny Kaomisaria ambony momba ny zon’olombelona (HCDH), kitro ifaharan’ny zon’olombelona.R.Nd. L’article Zon’olombelona – Fiarahamonim-pirenena: mangata-panazavana momba ny ”RaharahaFarafangana” a été récupéré chez Newsmada.
Basikety vehivavy: resin’i Madagasikara i Maorisy
Fandresena telo tamin’ny lalao telo nataony, no azon’ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin’ny taranja basikety, ho an’ny sokajy vehivavy. Omaly, mbola nahazo fahombiazana indray ny tovovavy malagasy, rehefa nanilika an’i Maorisy, mpampiantrano, tamin’ny isa mazava, 74 no ho 49. Tsy niady mihitsy ny fihaonana fa nanaovan’ny mpilalao malagasy, notarihin-dry Ange sy ny namany fanehoan-kery sy fampisehoam-pahaizana, fotsiny izy ireo, nandritra ireo tapa-potoana efatra nilalaovana.Nitarika an’isa hatrany ny Malagasy tamin’ireo 10 mn inefatra niditra. Tsy naharaka ny hazakazaka sy ny hafetsifetsena nataon’ireo Malagasy mihitsy ny Maorisianina, na teo aza ny fanohanan’ireo mpomba azy.Tafita amin’ny manasa-dalana, izany ny Malagasy, taorian’ity fandresena azony ity. Tafakatra torak’izany koa ny Maorisianina, noho ny naha “disqualifiée” an-dry zareo, Kaomorianina. Andrasana kosa izay hifanehatra amin’i Madagasikara, eo amin’izany dingana manasa-dalana izany. TompondakaL’article Basikety vehivavy: resin’i Madagasikara i Maorisy a été récupéré chez Newsmada.
Shell Vivo energy: tsy mijaly solika intsony ny eny Mahitsy
Notokanana, omaly, ny toby fitsinjaran-tsolika vaovao an’ny Shell eny Mahitsy. Fivarotan-tsolika faha-72 eto amintsika, an’ny orinasa Vivo Energy, manaparitaka sy mivarotra ny vokatra Shell (solika sy ny vokatra samihafa mifandraika aminy) eto Madagasikara.Manamora ny fividianan’ny mpanjifa ny vokatra ilainy, hita ao amin’ity toby vaovao ity, ny fampiasana ny karatra “prépayée Shell Petro+”. Ho an’ny ben’ny Tanànan’i Mahitsy, Rakotovao Andriambololona, “tsy mijaly famatsiana solika intsony ny any Mahitsy satria mitombo ny toby mpaninjara, raha iray ihany no nisy tany amin’ny 10 taona lasa”.Nilaza ny tale jeneralin’ny Vivo Energy, i Mondher Bouhouche, fa endriky ny fandraisan’anjaran’ny orinasa tantaniny amin’ny fampiasam-bola eto Madagasikara ary mitondra fampandrosoana ny firenena izao fotodrafitrasa izao. Marihina fa efa nisokatra ho an’ny mpanjifa teo amin’ny iray volana eo ity toby vaovao ity.Njaka A.L’article Shell Vivo energy: tsy mijaly solika intsony ny eny Mahitsy a été récupéré chez Newsmada.
Vono olona tany Ankazobe :: Mpandraharaha iray naiditra am-ponja
Naiditra am-ponja vonjimaika, eny Antanimora, afak’omaly alina, ny mpandraharaha iray mpividy vary any Ankazobe sy ireo namany roa lahy. Voarohirohy ho namono mpandraharaha iray hafa tany Anabohazo-Kiangara ireo olona telo ireo. Voalaza fa nokaramaina iray tapitrisa ariary ireo olona roa tompon’antoka mivantana tamin’ity vono olona ity. « Tany am-pividianana vokatra io mpandraharaha lasibatra io no nisy nitifitra. Namoy ny ainy teo no ho eo izy. Nidina avy hatrany tany amin’ilay toerana izahay rehefa naheno ny zava-nitranga. Voasambotra tamin’io fotoana io ihany ireo olona roa nitifitra niaraka tamin’ny basimborona nitifirana an’ilay mpandraharaha. Nilaza ireo namono fa io mpandraharaha io no naniraka sy nanakarama azy ireo”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria, any Ankazobe. Nanamora ny fisamborana an’ireo olona voampanga ireo ny hetsika manokana ho fampandriana fahalemana ataon’ireo zandary ao anatin’ny Vondron-tobim-paritra Analamanga, efa andro vitsy lasa izay. L’article Vono olona tany Ankazobe :: Mpandraharaha iray naiditra am-ponja est apparu en premier sur AoRaha.
Toamasina: hisitraka ny « Salon de l’étudiant » ireo mpianatra
Hotanterahina any Toamasina ny 30 sy 31 oktobra izao ny « Salon de l’étudiant » ho an’ireo mpianatra nahavita ny fanadinana bakalorea sy hiakatra amin’ny tontolon’ny oniversite amin’izay. Hivondrona amin’ny toerana iray ireo sekoly ambony ao Toamasina sy ny manodidina hampahafantatra ireo karazana lalam-piofanana ao aminy.Miresaka mivantana amin’ireo tompon’andraikitry ny sekoly, araka izany, ireo mpianatra. Misokatra ny fanontaniana rehetra hatramin’ny mety ho lalan’asa ho hita aorian’ny fiofanana na fampianarana hatao.Betsaka ireo tanora afa-panadinana bakalorea no sady te hiasa no hianatra ka misy ihany koa ireo sekoly ambony mandefa manao fizarana asa avy hatrany hahafahan’ny tanora mivelatra sahady sy manana lalan-tsaina amin’ny tontolon’ny asa.Takina indrindra amin’izao fotoana ny fananana traikefa ka izany no anton’ny fizarana asa avy hatrany na dia vao manomboka amin’ny taona voalohany aza ho an’ireo sekoly ambony efa manome fahalalahana ny mpianany amin’izany sehatry ny asa izany.Misy amin’ireo tanora ihany koa no tazomin’ny orinasa nanaovany fizarana asa avy hatrany rehefa tsapan’ny mpampiasa fa matotra sy afaka mamokatra ho an’ny orinasany ka avy hatrany dia omeny ny toerany ao amin’izany orinasa izany.Tatiana AL’article Toamasina: hisitraka ny « Salon de l’étudiant » ireo mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Caf: ho kandidà fanindroany i Ahmad
Nanapa-kevitra i Ahmad, filohan’ny kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf), fa mbola ho kandidà indray izy amin’ny fifidianana hotanterahina any Rabat, Maraoka, ny 12 marsa 2021. A raka ny fantatra, ny 28 oktobra lasa teo, no noraisin’ny Caf tamin’ny fomba ofisialy ny antontan-taratasy filatsahan-kofidian’i Ahmad.Raha tsiahivina, izy ny kandidà voalohany nitonona ho mpifaninana amin’ity ho filohan’ny Caf ity. Hatreto, tsy mbola nisy nilaza hifanandrina aminy ireo filohana federasiona ao Afrika. Mety mbola miandry hatramin’ny 12 novambra, fe-potoana farany, vao ho fantatra avokoa ireo kandidà rehetra.Mandra-piandry izany, efa maro ireo filohana fikambanana sy federasiona nilaza ny fanohanany an’i Ahmad, amin’ity. Ankoatra ireo, anisan’ireo olona efa naneho fankasitrahana amin’izao filatsahan-kofidiny izao indray i Nicolas Dupuis. Tsiahivina fa nanomboka ny taona 2017 no nitondran’i Ahmad ny Caf ary anisan’ny nampiavaka azy ny nampakarany ho 32 ny isan’ireo firenena mifaninana amin’ny “Can”.TompondakaL’article Kitra – Caf: ho kandidà fanindroany i Ahmad a été récupéré chez Newsmada.
Ivandrika – Farafangana: henjana ny fifandonana, dahalo dimy indray lavon’ny zandary
Ambetin-dresaky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard hatrany ny hoe « anjaran’ny dahalo indray izao ankehitriny no mihorohoro ». Tanteraka tokoa izany raha ny vokatra azo nandritra ny fifandonan’ireo zandary avy ao amin’ny tobin-jana-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Iabohazo sy ireo dahalo dimy lahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika . Nangalatra omby miisa 21 tao Mahazoarivo kaominina ambanivohitr’Ivandrika distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana, ny faran’ny herinandro teo ireo dahalo. Vokatry ny fifandonana, tafaverina avokoa ireo omby miisa 21 raha maty rotiky ny balan’ny zandary ireo dahalo dimy lahy. Tsy nisy naninona kosa ireo zandary. Nanamafy hatrany ny zandary rehefa ara-potoana ny fampandrenesana dia haingana ny vonjy taitra ataon’ny zandarimaria. Nanamafy hatrany ny Seg fa tsy maintsy mihorohoro amin’ny zandary amin’izay ny dahalo manomboka izao.Jean ClaudeL’article Ivandrika – Farafangana: henjana ny fifandonana, dahalo dimy indray lavon’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Toetry ny andro: maina sy mafana eto afovoan-tany
Maina ny andro eto afovoan-tany amin’ny ankapobeny ary hiakatra ny maripana ambony (28°C) indrindra fa ny alarobia no ahitana fidinany (26°C) izany, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Nanjaka ny orana ho an’ny tapany atsimo, ny faran’ny herinandro, nahazo izany avokoa ny atitany sy ny morontsiraka ary nirefy 30 mm ny rotsak’orana tany an-toerana. Nitohy, omaly, ny orana ho an’ny atitany any atsimo entin’ny atmosfera tsy marim-toerana. Eto Antananarivo kosa, alina no hotombanana hirotsaka ny orana. Manao volon’andro manjombona tanik’orana matetika fa tsy mahalatsaka satria tsy feno ny fepetra. Raha tazanina lavitra, rakotra setroka manjavona ny Renivohitra izay tsy misava mihitsy mandritra ny tontolo andro. Tsioka atsimo-atsinanana kosa ny hanjaka amin’ny ilany Atsinanana sy ny tapany avaratry ny Nosy.Vonjy L’article Toetry ny andro: maina sy mafana eto afovoan-tany a été récupéré chez Newsmada.
Fitsindromana “héroïne” : Telo lahy 5 taona an-tranomaizina
Niakatra tao amin’ny la­pan’ny Fitsarana ambony misahana ny heloka bevava Toa­masina, ny alatsinainy lasa teo, ny raharahan’ireo andian-jatovo voasambotry ny poli­sin’ny Fip noho ny fitsindromana zava-mahadomelina ma­hery vaika “héroïne”, ny 16 mey 2019. Tao amin’ny alan’ny lycée Jean Rabemananjara Salamazay Toamasina no tratra ireto andian-jatovo ireto tamin’io fotoana io. Araka ny laharan’ny antontan-taratasin’ady 61-Toa/20 nahavoarohirohy an’i Hajanirina Garnier Erick, 52 taona, mpamily taksiborosy (tonga niatrika ny fotoam-pitsarana), i Ali Ama­di Amada sy Rasolofoniaina Antonio Thierry ary i Do­mennico, ireto telo lahy ireto izay tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana satria efa nahazo fahafahana vonjimaika, tsy niandry ela tao am-ponja to­kony hiandry fotoam-pitsarana amin’ny maha raharaha goavana ny zava-mahadomelina toy itony. Niaiky, nandritra ny fotoam-pitsarana, i Ha­janirina Erick ary noporofoiny fa anisan’ny mpanjifa “héroïne” izy, saingy efa najanony izany noho ny fidirany hopitaly. Nohamafisiny teo anolo­an’ny fitsarana fa tsy anisan’ ireo voasambotry ny polisy teo am-pitsindronana izy fa ireo andian-jatovo telo lahy tratra teo am-pitsindronana teo akaikin’ny lycée no nitoroka azy ho nizara amin’izy ireo.Fivarotana sy fanapariahana ary fanjifana fitsindronana “héroïne” ny vesatra anenjehana ireto efa-dahy voampanga ireto. Nilatsaka ny sazy taorian’ny fifandresen-dahatra ka izao voaheloka sazy asa an-terivozona an-tranomaizina 5 taona miampy didy fampisamborana ireo voampanga.SajoL’article Fitsindromana “héroïne” : Telo lahy 5 taona an-tranomaizina a été récupéré chez Newsmada.
Fiatrehana ny fifidianana loholona: tsy hokitihina intsony ny lisitry ny mpifidy…
Efa mipetrapetraka avokoa. Nambaran’ny mpampaka-teny eo anivon’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, omaly fa hofaranana ny 11 novambra izao ny lisitry ny mpifidy vaventy, hifidy ireo loholona.Noferana ho iray volana mialoha ny 11 desambra, hanatanterahana ny fifidianana izany. « Tsy azo kitihina intsony ny lisitry ny mpifidy, aorian’io daty io », hoy izy, teny Alarobia, omaly. Mialoha izany, hotanterahina ny zoma izao ny an-tsapaka amin’ny laharan’ny kandidà amin’ny bileta tokana sy ny eny amin’ny peta-drindrina. Eo koa ny ho filaharan’izy ireo amin’ny fampielezan-kevitra amin’ny haino aman-jerim-anjakana (TVM/RNM).Miandry tsikera ny CeniNanteriny fa mandala hatrany ny fisokafana sy ny mangarahara ny eo anivon’ny Ceni ka hisy ny sehatra ifampidinihana amin’ny alarobia 4 novambra ho avy izao. « Iarahana amin’ireo mpisehatra rehetra, ahitana ny kandidà izany, ifampizarana ny vaovao sy ny fanomanana rehetra amin’izany fifidianana izany. Andrasana koa ny tsikera samihafa », hoy ihany izy. Hitohy any amin’ny distrika izany fifampizarana izany.Kandidà tokana, tsy misy mpifanandrinaTsiahivina fa miisa 14 ireo lisitra kandidà hifaninana amin’ity fifidianana ity. Miisa telo avy ny kandidà eto Antananarivo sy Antsiranana ary Toamasina. Roa avy kosa ireo kandida nirotsaka any Fianarantsoa sy Toliara ary iray, tsy manana mpifaninana ny kandidà any Mahajanga.Synèse R.L’article Fiatrehana ny fifidianana loholona: tsy hokitihina intsony ny lisitry ny mpifidy… a été récupéré chez Newsmada.
Fitsirihana tampoka: fiara miisa 47 nogiazana
Ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana, manohy ny fanaraha-maso ireo fiarakodia amin’iny faritra avaratry ny Nosy iny ny foibe fitsarana fiarakodia. Hatramin’ny 19 hatramin’ny 25 oktobra teo, nahatratra 430 ireo fiara nosavaina teny an-dalambe ka taratasina fiara 148 tamin’izany ny nosintonina noho ny tsy fahalavorariana hita amin’ilay fiara ka lasa «inaptes». Fiarakodia miisa 47 hafa kosa nampidirina ambalampamonjana satria tsy nanao fitsirihana ara-teknika ary ilàna fanamboarana manokana.Fiara miisa fito ny voamarina fa tsy nahavita fandraisana ara-teknika. Fiara 18 nomena fampitandremana sy toromarika hikojakojany ny fiara ampiasainy. 76 hafa kosa nahitana tsy fahatomombanana ara-teknika.Mitohy ny fanentanana ataon’ny foibe fitsarana fiarakodia ary manentana hatrany ireo tompona fiara na ny mpamily hikojakoja sy hanamboatra ireo fiarany taorian’izay fihibohana maharitra izay. Tokony hanatona ireo ivontoerana fitsarana fiarakodia amin’ny fotoana tokony hanaovany fitsirihana teknika ahafahana misoroka ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe ateraky ny tsy fahatomombanana teknika.Marihina fa hitohy sy hihamafy hatrany ny fitsirihana tampoka an-dalambe ary hivelatra manerana ny Nosy.Tatiana AL’article Fitsirihana tampoka: fiara miisa 47 nogiazana a été récupéré chez Newsmada.
Nofy tanteraka. Nahazo famatsiam-bola mitentina 7.900.000 Ariary Rasoarimanga Vololona hanatanterahana ny tetikasany. Nanatrika ny lanonana fanolorana izany, ny alarobia 28 oktobra 2020, ny Ben’ny tanànan’Ambohidratrimo, ny DGA sy ny Secrétaire Général Orange Madagascar Benja Arson, ny filohan’ny Orange Solidarité Madagascar Josie Randriambeloma ary ny filohan’ny Soroptimist International Club Mandrosoa Bodo Ramangason. Nanomboka ny taona 2016, manome tohana ho an’ireo vehivavy mandray anjara amin’ny fandaharan’asa “ maison digitale” ny « coup de cœur ô feminin” an’ny Fondation Orange. Mahazo tohana ara-bola sy ara-teknika hanatanterahana ny nofiny izay mendrika indrindra ka Rasoarimanga Vololona avy amin’ny “Maison Digitale pour les femmes” Ambohidehilahy ao amin’ny Soroptimist Club Mandrosoa no nandrombaka izany ho an’ny taona 2019. “Zanaka tantsaha, renim-pianakaviana manan-janaka efatra Rasoarimanga Vololona ary nanaraka fiofanana karazany maro tao amin’ny Maison Digitale pour les Femmes. Niofana momba informatika, ny fampiasana ny Excel, ny fitantanana tetikasa izy. Eo am-pandrafetana ny tetikasany ahazoana ny taratasy fanamarinana fahavitana fiofanana izy amin’izao fotoana izao. Nofiny ny hanitatra ny asa fiompiana akoho gasy ka ao anatin’ny tetikasany ny famokarana, ny fanakotrehana, ny fiompiana akoho ho atao sakafo ary amidy eto amin’ny tsena anatiny fa indrindra haondrana any amin’ireo nosy manodidina an’i Madagasikara. Mila fanampiana izy noho izany amin’ny fananganana tranon’akoho mahazaka zanak’akoho an-jatony, reny akoho 10, akoholahy roa ary vorontsiloza telo”. Marihina fa nanomboka tamin’ny taona 2015, “maison digitale” 30 no natsangana teto amintsika mba hanamorana ny fampidirana ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny asa, ny fanampiana azy ireo hahay hifehy ny fitaovana nomerika sy ireo rindram-baiko fototra. Eo ihany koa fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fitantanana ny varotra, ny bureautique sy ny maro hafa. Nirina R. Cet article FONDATION ORANGE : Nandrombaka ny « coup de cœur ô feminin 2019 » Rasoarimanga Vololona est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FONDATION ORANGE : Nandrombaka ny « coup de cœur ô feminin 2019 » Rasoarimanga Vololona a été récupéré chez Délire Madagascar.